Iwo mashanu akanakisa ekuwedzera eGnome Shell | Linux Vakapindwa muropa
Chiziviso cheUbuntu chakatokonzeresa vashandisi vazhinji kutanga kushandisa Gnom-Shell seyakagadzika desktop yavo Iri idambudziko revashandisi veavice vakatanga neUniity uye vasina kuona imwe desktop.
Zvinotonyanya kunetsa ndezvevaya vanobva kunzvimbo dzakareruka kana nharaunda dzakareruka senge Xfce kana MATE. Kubatsira vese vashandisi vatakanyora iyo 5 yakanakisa yekuwedzera yatinogona kuisa nekuishandisa muGnome.
1 Dash ku Panel
3 Usakanganisa Bhatani
4 TopIcons Uyezve
Dash ku Panel
Chokwadi vazhinji venyu (ini ndinozvibatanidza mune zvinyorwa) havadi iyo Dash iyo Gnome Shell inayo. Ndizvo kuwedzera kunoshandura iyo Dash uye inoshandura zvese kuita repaneru, sevamwe desktops vane, senge Cinnamon kana KDE. Uku kuwedzera kunonakidza kana iwe usingade aesthetics yeGnome.
Uku kuwedzerwa chiratidzo chechokwadi chezita racho. Icho chiwedzero chinotibatsira kushandisa matekinoro ePomodoro pakombuta yedu. Mune ino kesi, mushure mekuimisa, applet inoonekwa nePomodoro nguva system uye kutonga. Izvo zvinobatsira kune avo vari kutsvaga chigadzirwa pane desktop.
Zvizhinji uye zvakawanda zviziviso zvatinogamuchira pakombuta yedu, kwete chete yekubatanidza USB asiwo kana isu patinogamuchira maemail, khalendari maalarm, chats, nezvimwe ... Izvi zvakapusa kuwedzera mbeveve zvese izvo ziviso kuti tikwanise kushanda pasina chinokanganisa zvinonakidza, handiti?
Kuwedzeredza uku kunotibvumidza chinja chinzvimbo chemifananidzo yedesktop, kwete chete echinyakare mifananidzo asiwo mifananidzo yeapplet. Kuwedzera kunonakidza kweavo vanoda kugadzirisa yavo Gnome Shell zvishoma.
Kuwedzera uku iapplet yakapusa iyo inotiratidza mafaera ese, zvinyorwa uye mifananidzo izvo isu takachengeta mubhodi clipboard, magwaro atinogona kushandisa zvakare panguva yechirongwa uye kuti tinogona zvakare kusunungura nekutenda kune iyi applet. Zvirokwazvo kuwedzera kunonakidza, haufunge?
Izvi zvinowedzerwa zvinogona kuwanikwa mune yeGnome Shell yekuwedzera dhairekitori. Dhairekitori yemahara inosangana ne desktop, saka hapana kana dambudziko kuisa chero izvi zvekuwedzera. Chero zvazvingaitika, dhairekitori rizere nemahara ekuwedzeredza, zviwedzero zvinogona kubatsira zvakanyanya kupfuura izvo zvataurwa, kunyangwe izvo zvatakatora zvakakosha zvakanyanya kune vashandisi vanobva kumamwe madafura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Wepamusoro 5 Gnome Shell Kuwedzeredzwa
Zvakanaka, mune dzimwe nguva TopIcons Plus haindiratidze ma icon saka inosiya gap uye nekungotangazve kuwedzeredza ndinogona kuvaona zvakare.
Zvimwe zvinowedzeredzwa zvandinoona zvichibatsira ndezvekuti "Rakareruka mambure kumhanya" uye "Nzvimbo yenzvimbo yakatwasuka nzvimbo" yekupedzisira kuwana imwe nzvimbo mubhavhu repamusoro.
Julio Garcia Merlano akadaro
Ruzivo rwakanaka kwazvo, ndinoida… !!!
Pindura kuna Julio Garcia Merlano